कुनै राम्रो जन्मदिनको उपस्थिति छैन! Feed०० फिड रिडरहरू! | Martech Zone
बुधबार, अप्रिल 18, 2007 आइतवार, फेब्रुअरी,, २०१5Douglas Karr
सामग्री, जोश, गति ... यी हुन् तीन तत्व कि म आफ्नो क्लाइन्टहरु संग कुरा जब यो ब्लगिंग को लागी आउँछ। केही व्यक्तिहरू सोच्दछन् कि ब्लगिंग एक नार्सिस्टीक प्रयास हो - विशेष गरी जब तपाईं आफ्नो ब्लगिंग सफलताको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ। द्वन्द्व, अवश्य नै किन कोही सुन्ने छ यदि तपाईं हुनुहुन्छ भने छैन सफल? म फिडहरूको संख्या पोष्ट गर्दछु र मेरो टेक्नोराटी रैंक र अन्य जानकारी अद्यावधिक राख्छु ताकि म मेरो ब्लगको शीर्षकहरूको सफलताको प्रमाण प्रदान गर्न सक्छु।
भोली मेरो जन्मदिन हो म प्रायः चुप लाग्छु मेरो जन्मदिन किनकि यो इतिहासमा दुर्भाग्यपूर्ण दिन हो। हालसालका समयमा यो त्रासदीको एक हप्ता भयो (अब भर्जिनिया टेकलाई घटनाहरूको भयानक सूचीमा थप्नुहोस्)।
यद्यपि म मद्दत गर्न सक्दिन तर यो ग्राफ राख्न सकें र धन्यवाद मान्छेलाई जुन राम्रो मान्छेले सोध्न सक्ने सर्वश्रेष्ठ जन्मदिनको लागि। (मेरो बच्चाहरु र बाहेक AppleTV त्यो बिल र कार्ला मैले पाए।)
मैले आज मेरो फिडका लागि over०० भन्दा बढी पाठकहरूलाई हिट गरें!
चारै तिर टाँसिएको लागि सबैलाई धन्यवाद! केही हप्ता पहिले मैले मेरो th०० औं पोस्ट पेश गरें। म महान निर्माण गर्न कोसिस गर्दैछु सामग्री, मेरो आवेग सधैं जस्तो शक्तिशाली छ, र गति मेरो ब्लग को जारी! मैले कतै पढें कि केवल १% आगन्तुकहरूले वास्तवमै टिप्पणी गर्नेछन्। यदि तपाईं लजालु हुनुहुन्छ र यो मनपर्दैन भने, केवल मलाई थाहा छ कि म तपाईंको कम्पनीलाई साँच्चिकै प्रशंसा गर्दछु!
एउटा महत्त्वपूर्ण नोट: विशेष धन्यवाद जॉन चौ जसले मेरो फिडमा अधिक पाठकहरूलाई आकर्षित गर्न केहि परिवर्तनहरू गर्न प्रेरित गरे। तपाइँले मेरो फिडमा सामेल हुन आमन्त्रित गर्दै लेख अन्तर्गतको सानो पाठ याद गर्नुहुनेछ। साथै, म मेरो फिड भित्र होस्टिंग को एक निःशुल्क वर्ष को लागी एक विज्ञापन प्रदान गर्दछ। जोनको सल्लाहहरूको साथ, मलाई लाग्छ कि मैले आफ्नो आरएसएस अपोडेसनमा केहि बढि चाँडो ल्याएको छु। धन्यवाद जोन!
टैग: जोन चाउपाठकआरएसएसटेक्नोराटीविजय
Thunderbird आगमन! केहि सुविधाहरू हत्यारा हुन्, अरूहरू मार्नु पर्छ!
अप्रिल 18, 2007 मा 8: 16 PM
Th०० औ र बधाईको शुभकामना जन्मदिन!
अप्रिल 18, 2007 मा 8: 43 PM
अप्रिल 18, 2007 मा 8: 35 PM
राम्रो हकदार, उत्तम सामग्री राख्नुहोस् र तपाईं कुनै समयमा १००० मा हुनुहुनेछ!
अप्रिल 18, 2007 मा 10: 52 PM
lvl मा gratz
अप्रिल 18, 2007 मा 10: 56 PM
बधाई छ र जन्मदिनको शुभकामना!
अप्रिल 18, 2007 मा 11: 41 PM
बधाई छ डग, राम्रो हकदार!
जेम्स किंगस्टेड - डोमेन जानकारी
अप्रिल 19, 2007 मा 1: 23 एएम
मँ तपाईको लागि हर्षित छु, बधाई र जन्मदिनको शुभकामना!
मैले भर्खर तपाईको ब्लग पढ्न शुरू गरें र मलाई लाग्छ कि यो अद्भुत स्रोत हो। म विश्वस्त छु कि तपाईंसँग बहुमूल्य स्रोत छ। Th०० औँ अद्भुत चीज हो। राम्रो काम जारी राख्नुहोस् म तपाईंको भविष्यको पोस्टहरू पढ्ने आशा गर्दछु।
अप्रिल 19, 2007 मा 7: 59 एएम
दयालु शब्दहरूको लागि धन्यवाद जेम्स! यस जस्तो प्रतिक्रिया सधैं स्वागत छ। 🙂
अप्रिल 19, 2007 मा 2: 58 एएम
बधाई छ, र तपाइँको 29 औं जन्मदिन को लागी सबै राम्रा
... र एक ठूलो जन्मदिनको केक, स्वास्थ्य, र चाँडै-शीर्ष -२ti०० टेक्नोराटीमा।
अप्रिल 19, 2007 मा 7: 56 एएम
धन्यवाद मार्टिन। तपाई १० बर्ष भन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, यद्यपि। एक दिशा बुढ्यौलीको साथ, अर्को परिपक्वताको साथ। म भन्न सक्दिन जुन कुन हो, जे होस्! 🙂
अप्रिल 19, 2007 मा 4: 33 एएम
बधाई छ वास्तवमा डग ..
Feed०० फिड पाठकहरू कुनै मतलब उपलब्धि छैन .. यसले केवल ती प्रयासहरू देखाउँदछ जुन तपाईंले उनीहरूलाई सँभाल्नको लागि गर्नुभयो।
राम्रो काम र जारी राख्नुहोस्
अप्रिल 19, 2007 मा 7: 38 एएम
बधाई छ! त्यो एक विशाल उपलब्धि हो! BTW, कि एक राम्रो लगिरहेको वक्र हो।
अप्रिल 19, 2007 मा 7: 58 एएम
धन्यबाद। मलाई लाग्छ विकास वक्र कुनै चीज भन्दा बढि गतिको टेस्टामेन्ट हो। मँ वास्तवमा खोजी ईन्जिन नतीजा र प्लेसमेन्टको साथ पोस्ट संख्याको संख्यामा केहि सांख्यिकीय विश्लेषण लागू गर्न मनपर्दछ। म निश्चित छु त्यहाँ राम्रो सम्बन्ध छ। एक दिन म गणित गर्नेछु!
अप्रिल 19, 2007 मा 9: 03 एएम
जन्मदिनको शुभकामना, र # on०० लाई बधाई! तपाईले गर्नु भएकोमा धन्यवाद।
अप्रिल 19, 2007 मा 11: 16 एएम
डग, बधाई। पूर्ण रूपमा योग्य मलाई तपाईंको साइट र यसको सामग्री मनपर्दछ। ठूलो काम जारी राख्नुहोस्। र, जन्मदिनको शुभकामना।
अप्रिल 19, 2007 मा 12: 05 PM
हे डग - जाने बाटो! तपाईले प्रदान गर्नु भएको उत्तम सामग्रीको आधारमा, म शर्त दिन्छु कि सडक १००० द्रुत हुनेछ।